နူးညံ့အိစက်တဲ့အသားလုံးလေးတွေပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့ ကျိုင်းတုံဝက်သားလုံးခေါက်ဆွဲဆိုင်……. – FoodiesNavi
Foodies Navi ကနေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ ? ? စားသောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းလမ်းညွှန်ပေးနေရာကနေ ?? ?? အခုအခါမှာတော့ တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားစားသင့်တဲ့ ? ? ? ကျိုင်းတုံဝက်သားလုံးခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ? ? ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲ ၊ ဂျုံခေါက်ဆွဲ ၊ ညှပ်ခေါက်ဆွဲတွေကိုထူးထူးခြားခြား ? ? နူးညံ့အိစက်တဲ့အသားလုံးလေးတွေနဲ့ သုံးဆောင်ရတာကြောင့် ? ? စားသုံးသူတိုင်းကို တမူဆန်းပြားတဲ့အရသာပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ကျိုင်းတုံဝက်သားလုံးခေါက်ဆွဲဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့– လ/၁၃၉ ၊ တက်ခေတ်လမ်း ၊ လမ်းမတော်ရပ် ၊ တောင်ကြီးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ?
ဒီဆိုင်လေးမှာဆိုရင်တော့– ? ဂျုံခေါက်ဆွဲအရည် ၊ ? ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ၊ ? ဖက်ထုပ်ပြုတ် ၊ ? ဖက်ထုပ်ဆီချက် ၊ ? ညှပ်ခေါက်ဆွဲအရည် ၊ ညှပ်ခေါက်ဆွဲသုပ် ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲအရည် ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲသုပ် ၊ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲအရည် ၊ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲအသုပ် ၊ ယိုးဒယားသာကူကျို ၊ မိုင်းပန်ဆန်လုံးဆီကြော်အဆိမ့်နဲ့အချို ၊ တို့ဟူးခေါက်ကြော် ၊ ဖက်ထုပ်ပြုတ်နံရိုးပေါင်း ၊ ကြက်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ် ၊ ဝက်ခေါက်ကြော် ၊ ဝက်နံရိုးပေါင်း ၊ ? ဝက်သားလုံး ၊ ? ကြက်သားလုံး ၊ ကြက်သားပေါင်းစတဲ့နူးညံ့တဲ့ခေါက်ဆွဲသားကို ? ? ? လတ်ဆတ်တဲ့အသီးအရွက်အသားတွေနဲ့စီမံပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
ကျိုင်းတုံဝက်သားလုံးခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးမှာ ? ? လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ ? ဝက်သားလုံးဆီချက်ခေါက်ဆွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့နူးနူးအိအိဝက်သားလုံးလေးတွေဟာ ? ? စားကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဝက်သားလုံးကြားထဲကအရသာရည်လေးတွေ ? ? လျှာပေါ်ကိုယိုစိမ့်ထွက်ကျလာပြီး တွဲဖက်စားသုံးမယ့်ခေါက်ဆွဲသားရဲ့အရသာကို ? ? ပိုမိုကောင်းမွန်သွားစေဖို့အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ? ညှပ်ခေါက်ဆွဲလေးဟာလည်း မြေပဲမှုန့်ပါဝင်မှုကြောင့် ♨ ♨ ရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ မုန်ညင်းချဉ်စပ်စပ်လေးရယ် ? ? ငရုတ်သီးချဉ်လေးရယ် တွဲဖက်အားဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ? ? ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ထိမိတဲ့ အရသာထူးကိုဆွတ်ခူးရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ဒါကြောင့်တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်လို့ ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ? ? ဝက်သားလုံးဆီချက်ခေါက်ဆွဲနဲ့ ညှပ်ခေါက်ဆွဲသုပ်လေးကို မဖြစ်မနေစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ? ? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏱ ⏱ မနက်(၆)နာရီကနေ ညနေ(၃)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/ကျိုင်းတုံဝက်သားလုံးခေါက်ဆွဲဆိုင်
In Restaurant Guides Tagged Gyone Noodle, Shan Noodle, Si Chat Noodle Leaveacomment